Naya Post Nepal | १० वर्ष नि’सन्तान रहेकी महिलाले एकै पटक जन्माईन तीन छोरा गाउँलेहरू हेर्न उ’त्साहित घरमा लाग्यो भि’ड (भिडियो सहित)
१० वर्ष नि’सन्तान रहेकी महिलाले एकै पटक जन्माईन तीन छोरा गाउँलेहरू हेर्न उ’त्साहित घरमा लाग्यो भि’ड (भिडियो सहित)
निसन्तानको पीरमा करीव १० वर्ष गुजारेकी एक महिलाले ए’कै पटक तीन जना .(तिम्ल्याहा) स’न्तान जन्माएकी छन् । जुम्लाकी ३४ वर्षीया एक महिलाले नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटलमा आइत बार विहान तीन जना सन्तान ज’न्माएकी हुन् ।
लामो समय नि’सन्तान समस्या भोगेकी ती महिलाले टेष्टट्युव बेबी भनिने इन्भिट्रो फर्टिलाइजेसन (आईभिएफ) विधिबाट ति’म्ल्याहा छोरा पा’एकी हुन् ।
नर्भिकको आइभीएफ सेन्टरको प्रमुख र’हेकी डा नुतन शर्माले करीव १२ वर्ष नि’सन्तानको सम’स्यामा परेका एक दम्पत्तीले अन्तत आइ भीएफ विधिबाट तीन जना छोरा प्रा’प्त गर्न स’फल भएको ब’ताइन ।
उनले आज जन्मेका शि’शुहरुको तौल १.८, १.७ र १.५ केजी रहेको जा’नकारी दिईन ।‘आइभीएफ विधिबाट प्राय दुईवटा शिशुहरु ज’ न्मिने गर्दछन् । कहिले काँही तीनवटा पनि ज’न्माउन सकिन्छ । तर यो आफैमा भने ज’टिल वि’धि पनि हो । खासगरी गर्भ खेर जाने स मस्या हुनसक्छ ।
हामीले विशेष स्वास्थ्य नि’गरानीबाट स्वस्थ रुपमा शि’शुहरु जन्माउ न स’फल भयौँ,’ उनले भनिन् । पेटमा धेरै शिशु हुँदा पुरा अ’वधी रा ख्न पनि स’मस्या हुने डा शर्माले बताइन । यी तीन वटा शिशु ३५ हप्ताका हुन् ।
‘सामान्य त हामीले ३७ हप्ता पछि जन्मनेलाई नर्मल मान्दछौँ । तर यो तीनजना भएकोले केही छिटो नि’काल्नु प र्‍यो,’ उनले भनिन् । आइतबार विहान ति’म्ल्याहा शिशु का’खमा लिएको फोटो राख्दै डा. शर्माले भनेकी छन्, ‘नयाँ वर्षको ग’ज्जव सु’रुवात !’
२०७८ पुष २४, शनिबार प्रकाशित 1 Minute 160 Views